मनोरंजन – Everest Pati
काठमाण्डौ । गायक बुद्ध लामाले आफ्ना सहकर्मी केवीका खत्रीलाई सबैको अगाडीबाट नै आफ्नै काँधमा बोकेर भगाएका छन् । उनले डान्सिङ्ग विड द स्टारसको मञ्चबाट आफ्ना कोरियोग्राफर एवं सहकर्मी केवीका खत्रीलाई काँधमा बोकेर भएका हुन् । तामाङ्ग सेलो गीतमा…
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा गायिका सन्ध्या बुढा ‘काउली बुढी’ नामले चर्चित छिन् ‘काउली बुढी’ नामले चर्चा पाएकी उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै क्रियाशील हुन्छिन् । हालै मात्रै उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा केही नयाँ र तस्बिर अपलोड गरेकी छन् ।…
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन् ट्विंकल खन्ना । पछिल्लो समय उनले आफूलाई चलचित्र जगतबाट टाडा राख्दै आएकी छिन् । थुप्रै सफल चलचित्रमा काम गरिसकेकी ट्विंकल हिजोआज लेखन जगतमा आफ्नो नाम स्थापित गर्न लागिरहेकी छिन्। थोरै चलचित्रमा काम गरे पनि…
पहिलो पटक जब फेसबुकमा उसको म्यासेज आयो म झस्किएँ । मुटुको गति थामिए जस्तै भयो । श्रीमान घरमा हुनुन्थेनन् । फेरी पनि मैले कुनै गलत गर्दैछु झैं लाग्यो । अनलाईनमा आएको एउटा म्यासेजलाई हेर्न पनि मैले यता उता हेरेँ, कसैले देखेको पो छ कि ?…
रियाको सपोर्टमा ट्विंकल खन्ना बोल्दा ट्रोल बने अक्षय!
विद्या बालन, स्वरा भास्कर, शिबानी दांडेकर, तापसी पन्नूपछि अब अक्षयको श्रीमती ट्विंकल खन्ना पनि रिया चक्रवर्तीको सपोर्टमा आएकी छिन्। रिया चक्रवर्तीलाई सुशांत सिंह राजपूतको मृत्युपछि मुख्य आरोपी मानिएको छ। साथै अहिले ड्र-गको कारण…
इन्टरनेट प्रयोग गर्ने हरेक उमेरका मानिसहरु अहिले एउटा चिनियाँ एपमा झु’म्मिएका छन् । टिकटक एपमा पृष्ठभूमिको आवाजमा ओठ चलाएर १५ सेकेण्ड सम्मको आफ्नो भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेहरुको संख्या करोडौं पुगेको छ । के हो टिक टक ? टिक टिक एक सोसल…
यी कलाकार जस्ले रियालाई बचाउन सक्दो झुट बोले !
सुशान्त सिंह राजपुत घ'ट'ना'मा पछिल्लो समय भारतीय चलचित्र क्षेत्र तरंगित छ। बलिउडमा व्याप्त “नेपोटिज्म” (परिवारवाद) का कारण सुशान्तले मृत्युवरण गर्नुपरेको भन्दै स्टारका सन्तान र घरानिया फिल्म निर्माता र निर्देशकसँग निकट सम्बन्ध राख्नेहरु…
डिभोर्स भएको दुई वर्षपछि मात्रै माइती घरमा गइन अभिनेत्री मलाइका
मुम्बई – बलिउड अभिनेत्री मलाइका अरोराले करिब दुई वर्षपछि पारिवारिक भेटघाटको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएकी छन्।बलिउड अभिनेता सलमान खानका भाइ अरबाज खानसँगको सम्बन्ध विच्छेदपछि उनले खुलेर कुनै पनि पारिवारिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाएकी…
आफ्नो सुन्दरताको कारण धेरैलाई दिवाना बनाउन सफल नायिका आयशामाथि लागे यस्ता आरोप
एजेन्सी । बलिउड सुन्दरी नायिका आयशा टाकिया एक समयकी चर्चित नायिका हुन् । आफ्नो सुन्दरताको कारण धेरैलाई दिवाना बनाउन सफल भएकी आयशा टाकिया अहिले अभिनय देखि टाढा रहेकी छिन्। उनले फरहान आजमीसँग विवाह गरेकी थिइन्। धेरै धनि फरहानसँग विवाह…
चलचित्र क्याप्टेन बाट नेपाली रजतपटमा आएकी नायिका उपासना सिंह ठकुरीले पहिलो चलचित्रबाट नै दर्शकको राम्रो साथ पाइन् । चलचित्र क्याप्टेनमा उनको जोडी अनमोल केसीसँग बाधिएको थियो । उनको अभिनयलाई पनि दर्शकले रुचाएका थिए । चलचित्रको बजारमा जम्न…